Ny efijery mavitrika mandrakariva amin'ny iPhone 13 dia ho fampiasa amin'ny tananao | Vaovao IPhone
Ny efijery mandrakariva an'ny iPhone 13 dia ho hita eo amin'ny tanany
Luis Padilla | 20/07/2021 12:00 | iPhone 13, About us
Ny fanambarana ny iPhone 13 dia miha-manakaiky hatrany, ary na dia hisy vaovao hafa manandanja aza, Ny zavatra voalaza kely toa ny efijery mandrakariva dia mety ho fanananao tsara indrindra.
Manakaiky ny fotoana hahitantsika ny iPhone 13, angamba amin'ity volana septambra ity ihany, roa volana monja manomboka izao. Betsaka ny zavatra voalaza momba ny zava-baovao, toy ny ny tsara indrindra amin'ny fakantsary, tongasoa hatrany, ary ny efijery True Motion vaovao misy 120Hz, toy ilay efa ananan'ny iPad Pro efa hatramin'ny taranaka maro. Na izany aza, misy zavatra izay kely voalaza: ny efijery mandrakariva. Mark Gurman no nitondra ny lohateny vaovao, na dia efa nisy aza ny tsaho momba io fampiasa io nandritra ny taranaka maro, ary ny zavatra toa tsy dia manandanja loatra dia mety hidika ho fiovana mahery vaika amin'ny iPhone.
Ny Apple Watch no fitaovana Apple voalohany nanana ny efijery mandrakariva, "Always On Display", hatramin'ny Series 5. Nesoriko ilay Apple Watch, fa nianjera tamin'ny Series 6 aho, izay misy koa io fampiasa io. Ny mpampiasa sasany dia mampandeha azy satria misy fampiasa bateria avo kokoa, saingy ny zava-misy dia rehefa zatra io ianao dia sarotra ny miala amin'ny zavatra atolotra anao. Eny, lany ny bateria vetivety, saingy nampiharin'io Apple io fampiasa io ka ambany araka izay tratra ny fiatraikany, ary kely kokoa aza raha mampiasa faritra misy ny mainty no lokony lehibe indrindra, satria ny faritra mainty rehetra amin'ny efijery dia dia hiala. Ny teknolojia dia antenaina fa hitovy amin'ny iPhone 13.
Amin'ny famataranandro dia mamela anao hahita ny fotoana tsy mila ahodinanao ny tananao, fa amin'ny iPhone ity fampiasa ity dia mety handeha lavitra kokoa, ary raha ampidin'i Apple amin'ny maodely iPhone vaovao izy io dia tokony hanararaotra azy io. Inona no dikan'ity? Tsy misy ilana azy ny efijery hidin-trano mandrakariva izay hany hitantsika dia ny fotoana, izay no mitranga amin'izao fotoana izao rehefa ampandehanana ny lamba. Raha manana efijery mandeha foana isika izao, dia ho afaka hahita fampahalalana bebe kokoa, toy ny isan'ny fampandrenesana azontsika, ary maninona no ny toetrandro any amin'ny faritra misy anay, na fanendrena amin'ny kalandrie ho avy. Izany hoe, raha tonga ny efijery mandrakariva dia tokony ho tonga izy io miaraka amin'ny fanovana ny endrik'ilay efijery fanidiana, ary izany dia zavatra nandrasantsika efa ela.
Efa fantatsika ny iOS 15, fa i Apple kosa dia manana ace hatrany amin'ny finday avo lenta vaovao, ary azoko antoka fa hahita vaovao momba ny iOS 15 isika fa tsy naseho tamin'ny famelabelarana Keynote farany satria hiandry ny Navoaka ny iPhone 15, satria ho fanovana manokana ho an'ity smartphone ity izy ireo. Ho antsika izay hiova amin'ny maodely iPhone vaovao dia vaovao lehibe ity fa tsy ho an'ireo izay mikasa ny hijanona amin'ny maodely misy azy ankehitriny.. Ary raha tafiditra ao amin'ny iPhone 13 ny efijery mandrakariva, dia tsy maintsy miandry efijery fanidiana vaovao isika, amin'ny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Ny efijery mandrakariva an'ny iPhone 13 dia ho hita eo amin'ny tanany
WhatsApp dia efa mamela antsika hanatevin-daharana antso an-tsary amin'ny fotoana rehetra
Ahoana ny fanovana ny safidy fidirana ho an'ny fampiharana ao amin'ny iOS 15